March 2018 - Mero HeadlineThe News portal of Pokhara
दोश्रो राष्ट्रिय स्केटबोर्ड च्यम्पियनशिप पोखरामा भब्यताका साथ सम्पन्न
पोखरा, १७ चैत । पोखरामा जारी “दोश्रो राष्ट्रिय खुल्ला स्केट बोडिङ्ग महिला तथा पुरुष च्याम्पियनशिप–२०७४” भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगिता पोखरा रंगशाला स्थित अन्नपुर्ण स्केटवोर्ड स्थलमा सम्पन्न भएको हो । प्रतियोगितामा १४ वर्ष भन्दा माथी उमेर समुह पुरुष सिनियर तर्फ काठमाण्डौका गजेन्द्र वर्देवा प्रथम भएका छन । त्यसै गरि कास्कीका समिर विल्सन द्वितिय र तेश्रो कास्की पेन्टोलिन शेर्पा तृतिय भए । यसै गरि १४ वर्ष भन्दा मुनी उमेर समुह पुरुष तर्फ काठमाण्डौका धिरज परियार प्रथम, कास्कीका सुमित गुरुङ द्वितिय र कास्कीका राज कुमार तृतिय भए । महिला तर्फ काठमाण्डौका लोरिन राई र रेजिना मर्हजनले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाए । उनीहरुले आफ्नो खेल पर्दशन गर्दै महिलाहरु समेत यस खेलमा आर्कषण रहेको सहभागिता गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन ।
बिजेता हरु प्रथम र द्वितियलाई क्रमश नगद ५ हजार २ हजार ५ सयका साथमा १० हजार पर्ने स्केट बोर्ड र तृतियलाई स्केटबोर्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने महिला सहभागीहरुलाई प्रोत्साहान स्वरुप नगद र स्केट बोर्ड प्रदान गरिएको नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केट बोडिङ्ग संघका अध्यक्ष अच्युत खनालले जानकारी दिएका छन ।
बिजेताहरुलाई नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केट बोडिङ्ग संघका अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष चुडामणी खरेल, सचिब रामचन्द्र कोइराला, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद बिकास समितीका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण प्रसाद योगी, कास्की स्केटिङ संघका उपाध्यक्ष सुनिल पिसी, नेपाल खेलकुद पत्रकार मंच कास्कीका अध्यक्ष लगाएतले नगद, प्रमाणपत्र र स्केटबोर्ड प्रदान गरेका थिए ।
नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केट बोडिङ्ग संघका अध्यक्ष खनालका अनुसार नेपालमा स्केट बोर्ड खेलको प्रवद्र्धन तथा खेलाडी उत्पादनका लागि संघले आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको बताउँदै सान २०२० मा जापानमा हुने ओलोम्पिक खेलमा नेपालका तर्फ बाट दुइ जना स्केट खेलाडीलाई वाइल्ड कार्ड इन्टरी मार्फत सहभागिता गराइने बताए । पोखरामा स्केट खेलको माध्यम द्वारा पर्यटन पवद्र्धन गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको र यहाँको अन्पुर्ण स्केट पार्कलाई यथासिघ्र थप व्यवस्थित बनाउने समेत उनले बताए । पोखरा रंगशालाको स्केट पार्क विश्वकै दोश्रो नमुना र ठूलो मध्येको एक हो ।
यसै गरि संघका उपाध्यक्ष चुडामणी खरेलले नेपालको स्केट खेललाई थप माथी उठाउन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगाएत विश्व स्केट संघ संग आफ्ना योजनाहरु जानकारी गराएको बताउँदै नेपालमा स्केट खेलको प्रचुर संभावना रहेको बताए । यो खेलमा धेरै युवाहरुको आर्कषण रहेकोले पनि यसको बिकास एवम विस्तार गर्न संघले आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको बताए । यस अघि प्रतियोगिताको उद्घाटन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद बिकास समितीका अध्यक्ष खगराज पौडेलले गरेका थिए । प्रतियोगितामा २० जिल्लाका १ सय जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो ।
यातायात मजदूर संघको अध्यक्षमा धर्म भण्डारी चयन
पोखरा १७, चैत्र । नेपाल यातायात मजदूर संघको शनिवार पोखरामा सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशनले धर्मराज भण्डारीको अध्यक्षतामा ५३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा अजयकुमार राई चयन भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीर्घवहादुर केसी, उपाध्यक्षमा सुमन लामा, हरि थापा, जयवहादुर र महिला उपाध्यक्षमा सविना सिलवाल चयन भएका छन् । महसचिवमा नुरनाथ पन्त चयन भएका छन् ।
उपमहासचिवमा शान्ति भट्ट चयन भएका छन् । प्रदेस नं १ मा हरि थापा, प्रदेश ३ मा कृष्णवहादुर वस्नेत, प्रदेश नं ४ को उपमहासचिवमा नारायणवहादुर कुँवर, ५ मा भेषवहादुर खड्का, ६ मा ध्रुव थापा, ७ मा चक्रवहादुर वम चयन भएका छन् । यसैगरी सचिवमा प्रल्हाद श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा रमेशप्रसाद पौडेल र सहकोषाध्यक्षमा कुशेश्वर गुरुङ चयन भएका छन् । यसैगरी प्रादेशिक सदस्यहरुमा प्रदेश १ वाट यादवकुमार ओली, कमल थापा, सरिता श्रेष्ठ, २ वाट सिपाही हुसेन, धर्मेन्द्र प्रसाद, प्रदेश ३ वाट श्यामकुमार महर्जन लीला वस्ताकोटी, प्रदेश नं ४ को सदस्यमा अरुण कुमार सिंह, प्रदेश ५ वाट रमेश तिमिल्सिना, चिरञ्जीवि पाण्डे, प्रदेश ६ वाट गणेशवहादुर थापा, शैलेश श्रेष्ठ, राधिका भण्डारी र प्रदेश ७ वाट लववहादर शाही र शिवराज भट्टराई चयन भएका छन् ।
यसैगरी पदेन सदस्यमा प्रदेश १ वाट पूर्णकुमार प्रधान, २ वाट विश्वेश्वर पटेल, ३ वाट जगन्नाथ गौतम, प्रदेश नं ४ वाट किरणवावु पन्त, ५ वाट आत्मसिंह घर्ती, ६ वाट जयवहादुर विसी, ७ वाट केशवराज पन्त चयन भएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न आवद्ध संस्थाहरुवाट सदस्यमा दीपेन्द्र पाण्डे, वलवहादुर वस्नेत, विनोद रेग्मी, ईश्वर लामा, राजकुमार श्रेष्ठ, अनु श्रेष्ठ, केशवराज आचार्य, कृष्णप्रसाद भुगाई, गणेश चन्द, डिल्लीराम रेग्मी, पदमवहादुर मल्ल र योगेस केसी चयन भएका छन् ।
अधिवेशनले सहमतिमा नयाँ समिति चयन गरेको निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् । अधिवेशनमा देशका ५० जिल्लाका ५ सय भन्दा वढी प्रतिनिधि प्रयवेक्षक सहभागी भएका थिए ।
महेन्द्र गुफा मार्गमा सरसफाई
पोखरा १७ चैत्र । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका –१६ को आयोजनामा महेन्द्र गुफा मार्गमा सरसफाई गरिएको छ । महेन्द्र गुफाबाट शुरु भएको सरसफाई संगम मार्ग, मैदान, दीप र सुन्दर फिडसम्म गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले जथाभावी फोहोर नगर्न स्थानीयबाशीलाई आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले स्वच्छ सुन्दर पोखरा भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय आमा समूह यूवा क्लव विद्यालय तथा गुफा विकास समितिको सहभागिता रहेको थियो ।
पोखरा १७ चैत्र । पोखरा १६ बाटुलेचौरमा रहेको विन्ध्यवासिनी मा..विमा क्भ्भ् परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुलाई सम्मान सहित विदाई गरिएको छ । त्यस विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी क्भ्भ् मा सहभागी ७८ जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सफलताको शुभकामना दिंदै विदाई गरेका हुन् । कक्षा ९ का छात्रा नियन्ता घिमिरेको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा विदाई भएका विद्यार्थीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चन्द्रा थापा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्र. आचार्य, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष शिवराम पौडेल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य भिम प्र. पौडेल, हिरा पौडेलको अविर खादा र मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि थापाले विद्यालयको गरिमा उचो बनाउने सोचका साथ अध्ययनशील बन्न सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा प्राचार्य कृष्ण प्र.आचार्य, शिक्षक महेन्द्रमणि पौडेल, पूर्व प्र.अ. खिमलाल अधिकारी, छात्रा दीपा छन्त्याल, देवी वि.क. वविता परियार लगायतले बोल्नु भएको थियो कार्यक्रममा क्भ्भ् मा सहभागी विद्यार्थी ले विद्यालय, शिक्षक र कक्षा ९ का विद्यार्थीलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
पोखरा, १७ चैत । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिड टाउनको अध्यक्षमा देवी तिमिल्सिना सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अधिवेशनले लायन वर्ष २०१८÷१९ का लागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो । समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा रुक्मागत भण्डारी ‘विश्वास’, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र पौडेल, तृतीय उपाध्यक्षमा रविराज भुत्र्याल, सचिवमा दधिराम दाहाल, कोषाध्यक्षमा बुद्धिप्रसाद भण्डारी, सहसचिवमा रामजी नेपाली र सहकोषाध्यक्षमा पोषबहादुर भुजेल चयन भएका छन् ।
पोखरा पिस चौतारीमा पौडेल
पोखरा, १७ चैत । लायन्स क्लब अफ पोखरा पिस चौतारीको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले लायन वर्ष २०१८÷१९ का लागि डा. भवानी शंकर पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन गरेको छ । प्रथम उपाध्यक्षमा मगन लाल श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा प्रेमप्रसाद दाहाल, तृतीय उपाध्यक्षमा भरत गिरी, सचिवमा बिनायक रञ्जित र कोषाध्यक्षमा राम कुमार लामिछाने चयन भएको निर्वाचन आयुक्त तथा निवर्तमान अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
रिपोर्टिङ अफिसरमा प्रदिप श्रेष्ठ, एलसिआइएफ कोर्डिनेटरमा डिलाराम लामिछाने चयन भए । क्लबका पिआरओ फणिन्द्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा सिनियर एओजी तथा पूर्व अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद हुमागाईं, रिजन चियरपर्सन एवं पूर्व अध्यक्ष विनोद ढुंगाना, डिष्ट्रिक्क चियरपर्सन तथा पूर्व अध्यक्ष मेघनाथ काफ्ले, कमिटि कोचियरपर्सन तथा पूर्व अध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद चापागाईं, क्लबका लायन वर्ष २०१७÷१८ का अध्यक्ष जीवन क्षेत्री लगायतले बोलेका थिए ।
अमर ईन्द्र कोषका सञ्चालक अमर सुनारले कोषमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरेका छन् । उक्त कोषको रकम २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त कोषलाई क्लबले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
पोखरा, १७ चैत । बुल्समेन क्लब पोखराले आयोजना गर्ने पोखराको प्रतिष्ठित र चर्चित खेल मध्येको एक “तेश्रो बुल्समेन राष्ट्रिय खुल्ला शारिरिक सुगठन प्रतियोगिता–२०७५” को तयारी सुरु गरिएको क्लबले जनाएको छ । क्लबले शनिबार पोखरामा गरेको एक कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष नुना गुरुङले सो कुरा जानकारी गराएका हुन ।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार उक्त प्रतियोगिता २०७५ भदौ १६ गते पोखरामा भब्यका साथ आयोजना गरिने जानकारी दिए । उनले भविष्यका कर्णधार युबाहरुलाई शारिरिक रुपमा जोशिलो बनाउँदै समाजको दिगो बिकासमा अघि बढाउन शारिरिक सुगठन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै शारिरिक ब्ययाम दिर्घ जिवनका लागि आवश्यक समेत रहेको औंल्याए ।
पोखरामा हरेक दुइ वर्षमा आयोजना हुने बुल्समेन राष्ट्रिय खुल्ला शारिरिक सुगठन प्रतियोगिता सबै खेल प्रेमीहरुका लागि प्रतिक्षाको विषय रहेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले बुल्समेन क्लब समाजसेवामा पनि सर्मपीत रहेको उल्लेख गरे । स्थापनको छोटो समयमा नै क्लबले चन्द्रिका अधारभुत विद्यालय स्याङजा, कन्या क्याम्पस नदिपुरलाई विविध शैक्षिक सामाग्री र सरिता गुरुङ फाउण्डेशन र खेलकुदका विभिन्न संघ–संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराए ।
क्लबले आयोजना गर्ने तेश्रो संस्करणको प्रतियोगितामा पहिलो पटक महिलाहरुको समेत सहभागिता रहने क्लबले जनाएको छ । प्रतियोगितामा देशका करिब १ सय ५० प्रतियोगीहरुको सहभागिता रहने जानकारी दिंदै क्लबले ओभरअल च्याम्पियन एक जनालाई नगद ३ लाख प्रदान गरिने छ । यसै गरि हरेक तौल समुह प्रथम, द्वितिय र तृतियलाई नगद, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ भने प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब ४० लाख खर्च लाग्ने बताइएको छ । प्रतियोगिता बाट भएको आम्दानीले पोखरा रंगशालमा सुबिधा सम्पन्न तथा आधुनिक व्ययामशाला निर्माण गरिने र यो सबैका लागि सर्वसुलभ हुने क्लबले जनाएको छ ।
लिटिल स्टेपमा विदाइ कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा, चैत १७ । यस लिटिल स्टेप मा.वि. सिमलचौर, पोखरा – ८ मा एसइइ परीक्षामा सम्मिलित ५८ जना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयको तर्फवाट आज एक विदाइ कार्यक्रम आयोजना गरियो । संस्थापक निर्देशक श्री शेर बहादुर गुरुङ्ग एवम् प्राचार्य श्रीमती पम्फा गुरुङ्गको उपस्थितिमा आयोजित सो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई अबिर, फूलमाला तथा मायाको चिनो विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै संस्थापक निर्देशक दूवय द्वारा विदाइ मन्तव्य पनि व्यक्त गरियो । साथै शिक्षकहरुकोतर्फवाट मा.वि. संयोजक तारा प्रसाद सुवेदी एवम् कक्षा शिक्षक चित्र बहादुर अधिकारीले पनि विदाइ मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
विद्यार्थीहरुलाई विशेष भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो । विद्यार्थीहरुको तर्फवाट धन्यवाद मन्तव्य सन्तोष वि.क.ले दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमको उद्घोषण संयोजक श्री विनोद गिरीले गर्नुभएको थियो । स्मरण रहोस्, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले एस.ई.ई नतिजा मुल्याकन गरी सार्वजनिक गरेको उत्कृष्ट १० विद्यालय मध्ये लिटिल स्टेप मा.वि. पाचौँ स्थानमा परेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन पद्म नर्सिङ होमको अध्यक्षमा कृष्ण आचार्य
गिता राना मगर, पोखरा १७ चैत्र । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन पद्म नर्सिङ होम प्रा. लि.को अध्यक्षमा कृष्ण आचार्य निर्वाचित भएका छन । शनिवार पोखरामा सम्पन्न युनियनको छैठौ साधारण सभा तथा तेश्रो अधिवेशनले आचार्यलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । समितीको उपाध्यक्षमा अञ्जना थापा, सचिवमा होमनाथ पौडेल, सह सचिवमा हिरा बहादुर आले, कोषाध्यक्षमा बिकास भट््टराई र सह कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी शर्मा चयन भएका छन । त्यसैगरी सदस्यहरुमा अरबिन्द कुमार यादव, देवी कुमारी बस्नेत, रबि मोहन सुवेदी, माधव लामिछाने र लक्ष्मी पौडेल निर्वाचित भएका छन ।
सचिव बाहेक सम्पूर्ण पद सबसम्मत भएको अधिवेशनमा सचिवका लागी होमनाथ पौडेल र रामबिनोद महतो बीच निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा पौडेलले ३३ मत प्राप्त गरेका थिएभने महतोले २८ मत प्राप्त गरेका थिए । ७२ जना मतदाता रहेको निर्वाचनमा ६२ मत खसेको थियोभने एक मत बदर भएको थियो । त्यसैगरी युनियनको संरक्षक सल्लाहकारमा जितेन्द्र पौडेल र सल्लाहकारहरुमा नरेन्द्र बास्तोला, नरेश पौडेल, कालिदाश शर्मा, सन्तोष अधिकारी, गंगा थापा र लक्ष्मी कुंवर लाई चयन गरिएको छ ।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एबिसी टेलिभिजन चार नम्बर प्रदेशका ब्युरो प्रमुख एम बी आस्था मगरले कुनैपनि संस्थालाई बचाउनका लागी कर्मचारीको ठूलो भुमिका रहने वताउदै कर्मचारीहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र आफैमा एक संवेदनशील क्षेत्र रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु अझ बढी जिम्मेवार हनुपर्ने वताए । त्यसैगरी युनियनका सल्लाहकार एवं निर्वाचन कमिटीका प्रमुख नरेन्द्र बास्तोलाले जुनसुकै पदमा रहेर काम गर्ने मजदुरहरु पनि समान रहेको भन्दै आफ्नो हक र हितका निम्ती सम्पूर्ण मजदुरहरु एकताबद्ध भएर अगाडी वढ्न आग्रह गरे ।
उक्त अवसरमा यो वर्ष पद्म नर्सिङ होमबाट विदाइ भएर गएका कर्मचारीहरु कुशमाया गुरुङ, उमाकान्त रेग्मी, एक बहादुर कार्की र नविन मरासिनी लाई विदाइ एबम सम्मान गरिएको थियो । युनियनका अध्यक्ष जितेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पद्म नर्सिङ होम प्रालिका सहायक ब्यवस्थापक एवं युनियनका सल्लाहकार नरेश पौडेल, संस्थाका मेट्रोन रजनी पालिखे, सल्लाहकार लक्ष्मी कुंवर, सम्मानित ब्याक्तित्वको तर्फबाट नविन मरासिनी लगायतले वोलेका थिए । युनियनका उपाध्यक्ष कालिदाश शर्माले स्वागत मन्तब्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कृष्ण आचार्यले गरेका थिए ।
बनको नाममा भएको सरकारी ज्यादती बन्द गर्न माग
पोखरा, चैत्र १६ । नेपालमा बन संरक्षणको लागि बनाइएको निति प्रभावकारी भएपनि बन पैदावारको उपयोगमैत्रि नभएको बन ब्यबशायिहले गुनासो गरेका छन । नेपाल बन पैदावार उद्योग ब्यबशायि महासंघ, प्रदेश नं ४ ले शुक्रवार प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा उद्योग बन पर्यटन तथा बाताबारणमन्त्री बिकास लम्साललाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएर बन प्रति उपभोक्तामैत्री बाताबरण बनाउन माग गरेको छ । बिभिन्न बुँदे माग पेश गर्दे महासंघले नेपालले बनपैदावार बाट नै बिदेशी पैसा समेत भित्राउन सक्ने संभावना भएको स्मरण गराएका छन ।
हरियो बन नेपालको धन भने पनि हरियो भयो तर धन भएन, बन ब्यबशायि महासंघ प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र पढ्दै भने । उत्पादन मात्र गर्ने अनि बनमा कुहाएर नेपालमा यति प्रतिशत बन छ भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई थियो । हालको तथ्याङ्ग अनुसार नेपालमा ४५.७ प्रतिशत भु–भागमा बन छ । बिस्वका कयौ देशहरुले यो भन्दा निकै कम बन भएपनि बनबाट राष्ट्रिय पुँजिमा ठुलो योगदान दिएको महासंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कुल क्षेत्रफलको ९ प्रतिशत मात्र भएको बंगलादेशले बन पैदावार निर्यात गर्छ । ६० प्रतिशत बन भएको मलेशियाले अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत योगदान दिएको छ । बनपैदावारको सहि उपयोग निति ल्याउन सके ब्यापार घाटा कम गर्न ठुलो टेवा पुग्ने दावि समेत गरिएको छ । नेपालमा भने ब्याक्तिको आवादी जमिनमा भएको एउटा रुख काट्नका लागि पनि बन बिभागको हाकिमलाई पैसा दिनुपर्ने बाद्यता छ । त्यसमा पनि बिभिन्न खाले झन्भटहरु भएका कारण आफ्नो बारीको रुख नकाटेर रेडिमेड फर्निचर किन्न जानुपर्ने अबस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र पछि छलफल कार्यक्रममा सहभागि हुदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले यस्ता बाद्यकारी र झन्भटिलो प्रावधान हटाउने बताए । बनको संरक्षण जरुरी रहे पनि त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा आफु सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो । कुनै पनि बस्तुको उपयोग धेरै हिसावले गर्न सकीन्छ , उपयोग गर्दा अर्को कोणबाट असर र घाटा नपुग्ने अबस्थामा बिभिन्न अप्ठेरोहरु राखेर ब्यबधान गर्नु उपयुक्त नभएको उनले स्पष्ट पारे । बाताबरणमन्त्री बिकास लम्सालले पनि असजिला अबस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।